Fikrada Khaldan Ayaa Nolosha Naafeeysa - Xogside-news
Home BARNAAMIJYADA Fikrada Khaldan Ayaa Nolosha Naafeeysa
Fikrada Khaldan Ayaa Nolosha Naafeeysa
Wuxu ahaa muruq maal iskii u xoogsada oo nolosha kaslooni ku qaba laakiin Markii uu la kulmay nin danaysta ah oo ka laabtay Yurub isagoo xabad kimis ah cunaya Mr.Wilaim oo dhalinyaro ah wuxu ku yidhi “ Waxan dareemayaa qadhaadhka nolosha aad ku jirto, markaan arko dharkaaga jeexjeexan, jidhkaaga dhuuban ee qabowga iyo gaajada la gariiraya iyo dariiqyada ay hoyga kuu ah, waa arrin u gaar qaaraddan khariban ee Afrika.
Ninkii ayaa haddana miskiinka ku yidhi “ miyaad weyday magaaladan cid wax ku siisa, iyo qoys aad ku xidhan tahay? Haddii sidaasi tahay maxaad ka joogtaa iska tag, waxa jira magaalo gaajo iska daaye uu dahabka dariiqyada daadsan yahay. Waana magaalada London.
Markiiba dareenka Miskiinka ayaa is bedelay oo hoos u yidhi “ Si kasta oo ay noqoto waa inaan London dahabkeed doonataa”. Xaqiiq safar dhib badan ka dib wuu gaadhay London. Waxay ahayd magaalo cidhiidh ah oo gaadiidku is dhaafayo, laakiin isaga taasi waxba kama gelin waxa uu dariiqyada ka raadinaya dahabka daadsan. Sidii uu u wareegayay ayuu markii danbe gaajo la dhacay. Qoyskii guriga uu ku hor dhacay ku jiray ayaa arkay oo ka qaaday oo geeyay Isbitaalka isagoo miyir beelay. Fahamka khaldan iyo weedhaha aan runta ahayn noloshaada ayay kaa burburiyaan.
Previous articleKhiyaamada Iyo Dhaca Faaliyaha
Next articleWasiirka Wasaaradda Xidhiidhka Goleyaasha Iyo Arrimaha Dastuurka Oo Maanta Furay Kulanka Talo bixinta Xarunta Barashada Waddaniyadda Iyo Dastuurka